Shaqaalihii Villa Soomaaliya | allsanaag
Shaqaalihii Villa Soomaaliya
Maalintii madaxweyne Xasan Culusoow la wareegay Villa Soomaaliya muxuu sameeyey
Shaqaalihii Villa Soomaaliya ee dibadda loogu qaaday in dawladnimada la soo baro, ayaa casharkii u horeyey maanta qaatay. Shaqaalahan Villa Soomaaliya oo ka soo wada jeeday hal Beel ayaa loo qaaday Magaalo maddaxda dalka Burundi ee Bujumbura. Mashruucan Soomaalidan lagu barayo dawladnimada ayaa waxa maal gelinaysa Qaramada midoobay.
Shaqaalaha Villa Soomaaliya oo Casharkii u horeeyey u fadhiya, kaas oo ah Karaanimada iyo hab maamuuska dawladnimo
Hoos ka akhriso maqaalkii aan horay uga qornay.
67 ka mid ah, Shaqaalaha Villa Soomaaliya , oo u badan shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska Xasan Culusoow ayaa u dhoofay Bujumbura, Burundi .
(ALLSANAAG) Kooxdan ayaa waxay ka mid yihiin, shaqaale gaaraya 120 oo ka mid ah shaqaalaha dawlada ee ka shaqeeya xafiiska Madaxweyne Xasan Culusoow iyo RW Saacid oo isugu jira Karaaniyaal (secretaries), Saraakiil yaqaan sida dawladu u shaqayso (protocol officers ) iyo isku dubaridayaal xafiisyada dawlada (administrators). Shaqaalahan dawlada Soomaaliya oo aan horay Xafiis uga soo shaqayn, hase ahaatee xilalka ku helay qaab Qabiil ayaa waxa tababarkan u diray oo isku soo duba riday Qaramada midoobey iyo Africa Union Mission in Somalia (AMISOM).
Waftigan Shaqaalaha Villa Soomaaliya oo la soo tababarayo, waxa hogaaminayey Agaasimaha Guud ee wasaaradda Adeegga Bulshada iyo horumarinta Aweys Xadaad, oo isaga naftiisu qaab qabiil ku haya xilka oo ay meel ka soo wada jeedaan Wasiirka Adeega Bulshada Maryam Qaasim
Tababarkan shaqaalaha Villa Soomaaliya, ayaa waxa loogu qaban doonaa magaalada Bujumbura,ee dalka Burundi waxaana la qabanayaa inta u dhaxaysa 14th – 20th January iyo 21– 25 January 2013.
Gebagebadii Soomaaliya waa dalkii ugu horeeyey oo banaanka loogu qaado Karaaniyaal iyo Xisaabiyaal si loogu soo tababaro xafiisyada ay ka shaqeeyaan. Shaqaalahan la qaaday oo lagu qaaday magaca Soomaaliya oo Qaramada midoobay soo tababarayso dhamaantood waxay ka soo jeedaan Beesha Madaxweyne Xasan Culusoow.
← Salaxley Nin ka yimid miyaa madaxweynihii Khaatumo Sool ku soo dhoweeyey Madaxweynaha oo kulan la qaatay Guddiga Abaaraha, Ganacsato iyo Hay’adaha gar gaarka “ →